Mumastreets Motsvagwa Tweleb Rine 25 Years - Tudzaa | Home
Tudzaa May 18, 2021 04:18 247
Mumastreets eTwirra munondinakidza izvezvi vanhu vakutsvaga Tweleb rine 25 Years so .Hameno kana vakariwana tinenge tiriko kumateresi tichiona.
Ma tweleb ane 25 years ndeapi???????????????????? zvinganetse pic.twitter.com/paHjmqHvr6
— Manyora the Shunist (@ushuni_) May 18, 2021
So Nyaya yatangira kumaraini a Tete Fadzie .Mufesi ane 29 years akuda kunzwa kuti vanhu vanoti nemusikana wake Tweleb ane 25 years akutaura zvisina basa mumastreets. Zvekuti zvikazoonekwa nehama vanozotanga kutaura taura. Tweet renyaya racho riri paZasi apa.
Munoti chii nenyaya iyi ???? pic.twitter.com/zSixfoSp8L
— Tete Fadzie (@RealTalkFadzie) May 18, 2021
Hantie maiona kaa nyaya yacho padenga apo. Vanhu now vakuita chipiti piti chekutsvaga kuti ndiani vamwe vachiita kufungira fungira.
Apa ndakutaura ka personal opinion regarding issue iyi. Iye mufesi ndiye anonyatsoziva munhu wake and akamuda ari Tweleb. Saka munhu unofanirwa kugamuchira zvese zvaari. Izvo zvekuti hama dzinozoti zvakadai zvakadai vanofanirwa kuziva kuti vanhu vanoita ka fake lifestyle online but pa real life vari vanhu chaiwo. Zve online izvo kufadza vanhu yaa ndomaonero anguwo. Hameno kuti vamwe munoonawo sei...